Zokubala intanethi, izikhokelo kunye zokubala
Sokubala online CalcProfi
CalcProfi – ivideo zokubala, neziguquli, amazinga, kuchaphulo utshintshiselwano, zokubala intanethi. iitafile sokutshintsha, ubalo, izinga simahla.
Physics, imithetho esisiseko zokubala
Umthetho Newton wesibini sokubala isindululo
Bala bempi, ubunzima kunye ukukhawulezisa yi-newtons umthetho wesibini.
Umthetho Newton lesithathu zeekhaltyuleyitha isindululo
Bala nobunzima kunye ukukhawulezisa bezinto ezimbini ngokusebenzisa newtons ngumthetho wesithathu.
Amandla ombane ixesha namandla sokubala
Bala amandla ombane, amandla ombane, ixesha kunye nokuxhomekeka kwabo omnye komnye.
Ngoku, ukuxhathisa, inkcazelo ombane sokubala
Ubale lwangoku, ombane kunye ndixhathisa yinxalenye yombane.
Ukukhawulezisa Centripetal calculator ifomula
Bala Centripetal, kumgama isangqa kunye velocity, ngenxa setyhula formula isindululo nxaki.
Ukuxinana kunye netyiwa sokubala amanzi
Bala mninzi amanzi acocekileyo okanye ityuwa kumanqanaba etyuwa ahlukeneyo kunye namaqondo.
Force mzuzu, ubalo intanethi.
Ukubalwa mzuzu amandla (umzuzu Torque) ngokuthi radius-wesangqa amandla yomzobo umzimba eqinileyo.
Ngesantya yesandi emoyeni, ubalo intanethi.
Ukubalwa ngesantya yesandi emoyeni (km / h, m / s kwaye njalo njalo) kumaqondo obushushu ahlukileyo, online.
Dibana calculator ifomula kumandla
Bala yamandla, ubunzima kunye nokuphakama yomzimba.
Bala umthamo lokuqala nelokugqibela kunye noxinzelelo irhasi mthetho lukaBoyle.
Gold ukanti ukuba grams sokubala online
Guqula ubunzima igolide iigram troy kwigremzi kwaye ukusuka grams ukuba uTroy iigram.
Kobeka phi na ndamlinganisela kwezinye iiplanethi
Kangakanani naba kwezinye izijikelezi langa.
Velocity Angular calculator ifomula
Bala velocity emincinane, angle bayatshintshwa nexesha ujikelezo, ngokuthi ngokomlinganiselo velocity emboxo.
Zokubala Mathematic, izibalo, aljebra, wew
Quadratic equation Solver sokubala
Ukusombulula nayiphi quadratic equation, ukufumana discriminant zonke neengcambu alenxaki.
Amanani Binary Calculator
Yenza imisebenzi izibalo: phindo, Ukwahlula, ukudibanisa, ukuthabatha, siyavakala kwaye, siyavakala OKANYE, Modulo 2, kunye neenombolo yokubini
Iqhezu sokubala - Ukongeza, ngokuthabatha ngokuphindaphinda, ekwahlulweni amaqhezu, kwakhona amanani apheleleyo.
Amaqhezu ezishumi calculator
Ukuguqulwa inani lokugqibela ukuya iqhekeza kwaye iqhezu ukuba amanani wokugqibela
Algebra ibinzana sokubala online
Bala kwaye lula amabinzana aljebra, ezifana Ukongeza, ngokuthabatha ngokuphindaphinda, Ukwahlula, ruthi, ekhulwini.
Ingcambu Square calculator
Bala ingcambu (2 ingcambu degree) okanye ngokugqibeleleyo naliphi na inani.
Cube ingcambu sokubala
Bala ingcambu (3 ingcambu degree) okanye ngokugqibeleleyo naliphi na inani.
Nth ingcambu calculator
Bala isikwere, cube kunye naluphi nth ingcambu okanye ngokugqibeleleyo naliphi na inani.
Ikholam Ukongeza okusebenzela
Bala ngokudibanisa (udibaniso) kwamanani amabini, esebenzisa ikholam Ukongeza indlela.
Ngamaxwebhu ikholam nokuthabatha
Bala ngokuthabatha (umahluko) amanani amabini, usebenzisa indlela ikholam nokuthabatha.
Ngamaxwebhu ikholam lophindaphindo
Bala phinda (imveliso) yamanani ezimbini, kusetyenziswa indlela ikholam phindo.
Amaphepha Division Umhlathi
Bala ngokwahlula (QUOTIENT) amanani amabini, usebenzisa indlela ukwahlula imihlathi.
Guqulela amanani ukuya kwizigidi, amawaka ezigidi, ngezigidi, amawaka, lakhs kunye crores. Inani zeros naliphi na inani.
Fumana nomthamo iimilo zejiyometri ezahlukileyo, ezifana ityhubhu, ikhowuni, egesi, isigaba, iphiramidi, ngokuthi iifomyula ezahlukeneyo.
Cylinder calculator umthamo ifomula
Fumana nomthamo lombhobho, nge formula, esebenzisa isiseko kunye nokuphakama iradiyasi umbhobho.
Cone calculator umthamo ifomula
Fumana nomthamo cone, nge formula, esebenzisa isiseko kunye nokuphakama iradiyasi ikhowuni.
Cube calculator umthamo ifomula
Fumana nomthamo ityhubhu, nge formula, usebenzisa ubude okusekupheleni tyhubhu ngayo.
Sphere calculator umthamo ifomula
Fumana nomthamo sigaba, ngenxa formula, esebenzisa radius omda.
Ezibunxantathu olubuxande Iphiramidi umthamo sokubala
Fumana nomthamo iintlobo ezahlukeneyo iiphiramidi, ezifana ezibunxantathu, uxande naziphi na ezinye iintlobo iiphiramidi, ngokuthi iifomyula ezahlukeneyo.
Fumana ummandla iimilo zejiyometri ezahlukileyo, ezifana isikwere, uxande, iparallelogram, trapezoid, irhombus, isangqa, unxantathu, ngokuthi iifomyula ezahlukeneyo.
Kummandla isangqa, indawo isangqa calculator ifomula
Fumana ummandla yiRHOMBUS, nge formula, esebenzisa radius okanye sangqa isangqa.
Kummandla isikwere, indawo square calculator ifomula
Fumana ummandla isikwere, ngenxa iifomyula, usebenzisa ubude amacala isikwere okanye nemigca.
Kummandla iparallelogram, indawo iparallelogram calculator ifomula
Fumana ummandla logramu, ngenxa iifomyula, usebenzisa ubude macala, ukuphakama, imigca emi phakathi kwabo.
Area ngoxande, indawo uxande calculator ifomula
Fumana indawo ngoxande, ngenxa iifomyula, usebenzisa ubude macala, ubude nemigca emi phakathi imigca.
Kummandla irhombus, indawo irhombus calculator ifomula
Fumana ummandla yiRHOMBUS, ngenxa iifomyula, usebenzisa ubude icala, ukuphakama, ubude imigca, incircle okanye radius circumcircle.
Kummandla trapezoid, indawo trapezoid calculator ifomula
Fumana indawo ethile trapezoid, ngenxa iifomyula, usebenzisa ubude emacaleni isiseko, ukuphakama, um, ubude nemigca emi phakathi kwabo.
Kummandla unxantathu, alinganayo indawo unxantathu ayisoselisi calculator ifomula
Fumana ummandla iintlobo ezahlukeneyo zoonxantathu, ezifana alinganayo, ayisoselisi, unxantathu ekunene okanye scalene, ngokuthi iifomyula ezahlukeneyo.
Fumana obungama iimilo zejiyometri ezahlukileyo, ezifana isangqa, isikwere, uxande, unxantathu, iparallelogram, irhombus, trapezoid ngokuthi iifomyula ezahlukeneyo.
Yayimalunga isangqa (umjikelezo isangqa) calculator ifomula
Fumana umtya (umjikelezo) we isangqa, nge formula, esebenzisa kumgama isangqa.
Yomjikelezo square, iingcingo sokubala ifomula
Fumana yomjikelezo square, ngenxa iifomyula, usebenzisa ubude becala square.
Yomjikelezo iparallelogram, iingcingo sokubala ifomula
Fumana obungama iparallelogram, nge formula, usebenzisa ubude macala ipharalelogramu.
Umjikelezo ngoxande, iingcingo sokubala ifomula
Fumana obungama luxande, nge formula, usebenzisa ubude macala uxande.
Yomjikelezo irhombus, iingcingo sokubala ifomula
Fumana obungama irhombus, nge formula, usebenzisa ubude becala irhombus.
Yomjikelezo trapezoid, iingcingo sokubala ifomula
Fumana yomjikelezo trapezoid, nge formula, usebenzisa ubude onke amacala trapezoid.
Yomjikelezo unxantathu, iingcingo sokubala ifomula
Fumana obungama iintlobo ezahlukeneyo zoonxantathu, ezifana alinganayo, ayisoselisi, ekunene okanye unxantathu scalene.
Umgama phakathi kweendawo ezimbini calculator
Bala umgama phakathi kweendawo ezimbini ezinemilinganiselo emibini.
Calculator ifomula kuphakathi
Bala kuphakathi icandelo umgca phakathi ezimbini ezinemilinganiselo emibini.
Umgama calculator ifomula
Bala umgama phakathi kweendawo ezimbini ezinemilinganiselo emibini, ngokusebenzisa ezihambelanayo zabo.
Bala engile, amacala kunye nendawo kanxantathu.
Dibanisa okanye uthabathe iintsuku ixesha nomhla
Yongeza ixesha umhla okanye ukuthabatha ixesha ukususela kumhla.
Adding kunye nokuthabatha ixesha
Adding kunye nokuthabatha ixesha wokubala: ukudibanisa okanye ukuthabatha ixesha iintsuku, iiyure, imizuzu, imizuzwana.
Bala iintsuku nexesha phakathi kwemihla
Bala ixesha nomhla phakathi kwemihla emibini namaxesha 2, kwiminyaka, iinyanga, iiveki, iintsuku, iiyure, imizuzu, imizuzwana.
Ixesha uguqulelo sokubala, uguqula ixesha iminyaka, iintsuku, iiyure, imizuzu, imizuzwana.
Kangakanani ixesha de umhla?
Mingaphi iminyaka, iintsuku, iiyure, imizuzu neesekondi ekhohlo kude umhla.
Njani ixesha idlule ukususela kumhla?
Kudlule iminyaka emingaphi, iintsuku, iiyure, imizuzu, imizuzwana ukususela kumhla.
Zingaphi iintsuku ngenyanga?
Fumana inani ngqo leentsuku nayiphi na inyanga.
Zingaphi iintsuku zomfundi enyakeni?
Inani leentsuku lwangoku, Elandelayo, Edlulileyo, okanye nayiphi na enye ngonyaka.
Ixesha isixhobo sokubala
Ukongeza, ukuthabatha ixesha, umahluko phakathi kwemihla, uguqulelo ixesha: usuku, ngeeyure, imizuzu, imizuzwana.
Zingaphi iintsuku de umthombo?
Inani ngqo leentsuku, kwiiyure, imizuzu neesekondi eziseleyo de entlakohlaza.
Zingaphi iintsuku de ehlotyeni?
Inani ngqo leentsuku, kwiiyure, imizuzu neesekondi eseleyo kude kube lihlobo elilandelayo.
Zingaphi iintsuku de bawe na?
Inani ngqo leentsuku, kwiiyure, imizuzu neesekondi eziseleyo de ukuwa olulandelayo.
Zingaphi iintsuku de ebusika?
Inani ngqo leentsuku, kwiiyure, imizuzu neesekondi eziseleyo de ebusika olulandelayo.
Internet, iikhompyutha, izixhobo web, ezivelisa lokugqitha
Velisa igama eligqithisiweyo esekelwe elingundoqo olomeleleyo.
IP wam. Fumana idilesi yakho ye IP
Ungafumanisa yakho idilesi ye-IP, indlela yokusebenza, umboneleli, ilizwe ne sixeko.
Ulwazi malunga kwidilesi ye IP
Fumanisa umboneleli, ezweni umzi kwidilesi ye IP.
Random yefowuni yenani
Fumana uluhlu iinombolo zefowuni random ngenxa wocingo kunye cell phones, kunye nenani ezahlukeneyo lamasuntswana ngokweentlobo ezahlukeneyo.
Online yebhakhowudi generator
Fumana yebhakhowudi yikhowudi imveliso yesuntswana.
Iileta Russian lweSpyNet
Ekutayipheni iileta Russian iileta IsiNgesi kwaye IsiNgesi ukuba Russian.
Chwetheza iileta Hindi kwi Hindi yenyani yezitshixo.
Arabic yezitshixo online
Chwetheza iileta nesiArabhu Arabic yenyani yezitshixo.
Currency Converter, amazinga kutshintsha imali, marike
Bitcoin i-calculator kwi-intanethi, uguqule i-Bitcoin. Ixabiso leBitcoin namhlanje kwimarike yokuthengiswa kwemali yedijithali.
I-Ethereum calculator, i-Ethereum converter
I-Ethereum yokubala i-intanethi, i-Ethereum iguqula. Ixabiso le-Ethereum namhlanje kwimarike yokutshintsha imali.
I-litecoin calculator, i-Litecoin converter
I-Litecoin i-calculator kwi-intanethi, i-converter i-Litecoin. Ixabiso leLitecoin namhlanje kwimarike yokutshintshwa kwemali yedijithali.
Chemistry, umcimbi eziphilayo, iigesi, izinto
LezeMpilo, ukomelela, ukutya
Bala ukuba iimfuno ikhalori ngemihla ukuba ufuna ubunzima ilahleko okanye ukugcina ubunzima bakho.
Postcodes, imozulu, umgama kunye nexesha nemimandla
An imozulu oluchanileyo kuqikelelo lwemozulu nasiphi na isixeko ehlabathini kuba namhlanje, ngomso, iintsuku ezi-3, iveki, iintsuku ezili-10.
Umgama phakathi imizi sokubala
Umgama Geographical ngendlela ethe ngqo kwaye emendweni phakathi izixeko ezibini.
Umahluko bexesha phakathi kwezixeko
Chaza umahluko bexesha phakathi imizi, imimandla xesha, umahluko ixesha phakathi imizi zehlabathi
Yeposi ikhowudi finder
Ndimfumanele yeposi ngokuthi idilesi nayiphi na indawo ehlabathini online.
Ngokuzenzekelayo, iimoto: ivili ephepheni, sari zobugcisa
Imoto iinkcazelo yobugcisa
Iinkcukacha zobugcisa naluphi uhlobo lwemoto kunye nendlela.
Ukukhethwa yemoto specifications
Ukuba ukhethe imoto yi iinkcukacha banikwa yobugcisa.
Ivili kunye kwidiski ngobukhulu xa lwemoto kunye nomzekelo
Factory ubungakanani kweevili kunye disks, iinketho replacement, idiski ukulinganisa, kugrunjwa ze nayiphi make kunye iimoto.
Utshintsho kubungakanani yangaphandle ivili, ukucoca, isantya readout, njalo njalo kunye nezinye kwivili neemoto.
Yambathani neesayizi, izihlangu neesayizi, iitshati ubungakanani, ngesigqubuthelo, imixwayo, imisesane nobukhulu
Shirts abantu Ugqibezelo sokubala online
Guqulela shirts abantu ubungakanani amazwe ahlukeneyo, ezifana nobukhulu American, British, yaseYurophu ngamazwe.
T-shirt Ugqibezelo sokubala online
Iqulathe ezinkulu nezincinane t-shirts amadoda kunye nabafazi bakhe ubungakanani itshathi kumazwe awahlukeneyo.
Guqulela ubungakanani yangaphantsi amadoda ukuba amazwe ahlukeneyo, njenge American, ezinjengesiJamani, isiFrentshi, Italian, Russian, IsiCzech, IsiSlovak, ngamazwe, okanye esinqeni nobukhulu.
Guqulela ubungakanani kwabasetyhini bikinis kumazwe ahlukeneyo, njenge American, British, Italian, Russian, ubukhulu ngamazwe, ubungakanani Bust, okanye esinqeni kwenyonga nobukhulu ngeesentimitha.
Ijini nebhulukhwe nobukhulu sokubala online
Guqulela amadoda kunye nabafazi bakhe jeans nebhulukhwe bukhulu amazwe ahlukeneyo, njenge American, British, Italian, isiFrentshi, Russian, Japanese, ngamazwe, okanye esinqeni elalisesinqeni nobukhulu.
Guqulela iibhatyi kwabasetyhini ubungakanani amazwe ahlukeneyo, njengathi, UK, yaseYurophu, Italian, Japanese, Russian neesayizi, ngamazwe, isifuba ububanzi, okanye esinqeni elalisesinqeni nobukhulu.
Teen yakhe imbadada ubungakanani sokubala
Chaza ubungakanani imbadada umntwana wakhe, ukuguqula zihlangu teen ukuba ubukhulu kumazwe awahlukeneyo.
Izihlangu amantombazana Ubungakanani sokubala online
Guqulela amantombazana zihlangu kumazwe ahlukeneyo, njenge yaseYurophu, British, American (USA), ubungakanani Japanese okanye ngeesentimitha.
Izihlangu Abantwana Ubungakanani sokubala online
Guqulela abantwana bezihlangu kumazwe ahlukeneyo, njenge yaseYurophu, British, American (USA), ubungakanani Japanese okanye ngeesentimitha.
Guqula usana ukuyambesa abahlukahlukeneyo amazwe ahlukeneyo, njenge American, British, yaseYurophu, ubukhulu Russian, esifubeni ububanzi nobude, okanye ubudala yosana.
Iiglavu abantu Ugqibezelo sokubala online
Ichaza iiglavu abantu ubungakanani nokumakishwa kumazwe awahlukeneyo.
Iiglavu kwabasetyhini Ugqibezelo sokubala online
Guqulela kwabasetyhini iiglavu abahlukahlukeneyo ezinobukhulu ezahlukeneyo, ezifana ngamazwe, isandla umtya ngeesentimitha okanye intshi.
Izincedisi ubungakanani calculator online
Fumana ukuguqula izincedisi ezahlukeneyo, ezifana iminqwazi, imixwayo, imisesane, iiglavu ubukhulu kumazwe awahlukeneyo.
Ring Ubungakanani calculator online
Guqulela ring abahlukahlukeneyo American, British, Russian, ubukhulu Japanese, ububanzi kwi buyi kunye intshi, okanye umnwe umtya.
Nezacholo Ubungakanani calculator online
Guqulela izacholo abahlukahlukeneyo ngobukhulu yaseRashiya umtya isandla ngeesentimitha okanye intshi.
Gold sekharethi calculator online
Guqula iisampuli egolide phakathi carats, edume igolide okanye ipesenti zegolide iimpahla.